Turkiga oo Puntland ugu deeqay dhisme masjid dhawaan laga hirgalin doona Garowe. – Radio Daljir
Garowe, Janu, 23 – Dawladda Turiga ayaa dawladda Puntland ugu deeqday dhisme ballaaran oo masjid kaasi oo dhawaan laga dhisi-doono magaalada Garowe.
Wasiirka caddaaladda Puntland C/kariin Shiikh Xassan ?Ajaayo? oo waraysi gaar ah siiyay radio Daljir ayaa shaaca ka qaaday intaan la bilaabin dhismaha masaajidka in dalka Turkiga gaar ahaan caasumadiisa Istabul tababaro lagu soo siin doono culumaa’udiin iyo qaar-kamida shaqaalaha wasaaradda caddaaladda Puntland, si ay fikir iyo aragti fiican uga heleen masaajid-ya Turkiga iyo habka looga faa’iidaysto.
Wasiir Ajaayo, ayaa sheegay in masjidkaasi uu ka koob-naan doono dhismayaal kale duwan oo u kala baxaya, sida goobo lagu cibaadaysto, goobo lagu shiro, goobo wax-lagu akhristo, goobo jimicsi, goobo waxbarasho, iyo goobo meherado ah.
Wasiirka cadaalada Puntland C/kariin Shiikh Xassan ‘Ajaayo’ ayaa tilmaamay in mashaariicda dhismayaasha masaajida uu yahay mid ay dawladda Turkigu ugu yaboohday guud ahaanba dalka Soomaaliya maamulada ka jira, balse arrintaasi ay kala tashanayso DFKS.
Jamhuuriyadda islaamiga ah ee Turkigu waxaa ay lagu xasuustaa taariikhda dawlaha islaamka dhismayaasha masaajida, tusaale ahaan dhismaha masjidka Maka Al-mukarama ee barakaysan iyo dhismayaal qadiimiya oo masaajid kuwaasoo ay ka dhistay qaaradaha dunida.